I-Commun.it: Ukuphathwa Komphakathi Okulula kwe-Twitter | Martech Zone
I-Commun.it: Ukuphathwa Komphakathi okulula kwe-Twitter
NgoLwesihlanu, Novemba 22, 2013 NgoLwesihlanu, Novemba 22, 2013 Douglas Karr
Kuleli sonto, bengimenywe ukuthi ngizokhuluma Ama-Smartups (Ukukhangisa Okuhlakaniphile + Ukuqalisa) ngumsunguli wayo, Tim Flint UTim ungowendawo analytics guru. Ingxoxo yami ibisenzelwa ukusebenza kahle futhi ngikhulume ngayo ikakhulukazi maqondana nezibalo… kodwa nokuthi ukusebenza kahle kube nomthelela kanjani emizamweni yami yebhizinisi.
Enye indawo engithinte kuyo bekungukuphindaphindeka kwezinombolo ezidinga ukuheha, kepha bese unganaki ukuxosha izinombolo nokwenza ngcono okulandelayo onakho. Ngokuqondile ku Martech Zone, ukukhula kwethu kwaqhuma lapho siyeka ukujaha ama-tweaks we-SEO namasu wokuxhumanisa akamuva we-link-futhi esikhundleni salokho - sagxila ekunikezeni inani kumakhasimende ethu. Leli nani lalibhala kakhulu futhi linikeza okuqukethwe okunothile.
Ukuphatha umphakathi wakho we-Twitter kudinga amathuluzi nokubika ukukhomba abasebenzisi ofisa ukuxhumana nabo, lalela abasebenzisi abafuna imikhiqizo nezinsizakalo ozihlinzekayo, unganaki noma uyeke ukulandela ogaxekile nama-akhawunti angasebenzi, bese ushicilela best okuqukethwe kungenzeka ukuheha, ukugcina nokuguqula abalandeli abakhulu kakhulu. Yilokhu I-Commun.it unethemba lokunikeza abasebenzisi bayo ngengxenyekazi yayo.
ICommun.it Inikela Ngezici Ezilandelayo
Amaphrofayli amaningi we-Twitter - Phatha amaphrofayli amaningi we-Twitter kalula kusuka kudeshibhodi eyodwa.
Amalungu Ethimba - Mema amalungu eqembu lakho ukuphatha umphakathi wakho.
Ukuqonda - Thola ukuthi ngubani okumele alandele, abonge futhi aphendule.
Ukuqapha - Linganisa imizamo yakho yezokuxhumana, wazi ukuthi yini okusebenzayo. Ungaphuthelwa ukubalulwa okubalulekile.
Ukuthengisa Okunamandla - Gxila kubathonya bakho nabasekeli bakho abaphezulu, ungaphuthelwa ukuzibandakanya kwabo, balandele.
Phatha uhlu lwe-Twitter - Yakha umphakathi ohlanganyele usebenzisa uhlu lwe-Twitter. Hlukanisa uhlu ngezigaba ngokwezifiso.
Usebenzisa amathuluzi afana neCommun.it, ungaphatha kangcono okulandelayo okusemandleni akho kunokujaha okuningi. Inkinga ngombono we-funnel ukuthi abantu bakholelwa ukuthi phansi kwe-funnel kumile. Isibonelo, uma uthola isilinganiso sokuguqulwa esingu-2%, udinga nje ukuthola izivakashi eziningi ukuze wandise ukuthengisa kwakho. Sithole ukuthi lokhu akunjalo neze… kufanele ngabe usebenza ngokuguqula abalandeli onabo.
Tags: ikhomishini.itumphakathiUkuqashwa KomphakathiTwitter
I-Litmus: Ingabe Abantu Bangayifunda Ngempela I-imeyili Yakho?
Kungani Ibhizinisi Lakho Kufanele Lilungele Ukuhamba Ngamaholide